किसानको प्रदेश नं. ६ को एकता भेला सम्पन्न, सरकारमा किसानहरुको प्रतिनिधित्वको माग – Enayanepal.com
किसानको प्रदेश नं. ६ को एकता भेला सम्पन्न, सरकारमा किसानहरुको प्रतिनिधित्वको माग
सुर्खेत, असोज ७ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) को प्रदेश नं. ६ को एकता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम विहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
माओवादी धारका विभिन्न घटकहरुको एकता भएपछि अन्य जनवर्गिय संगठनको एकता गर्ने क्रममा विहीबार किसानको प्रदेश नं. ६ को एकता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको हो । भेलामा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय महासचिव विष्णुप्रसाद चौधरीले सरकारमा किसान वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि किसानहरुलाई सत्तामा पु¥याउनुपर्ने चौधरीले बताए ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि कृषिको व्यवसायिकरण हुन नसकेको भन्दै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि भुमि सुधार आवश्यक भएको बताए । भूमि सुधारका लागि पनि किसानहरुलाई सत्तामा सहभागी बनाइनुपर्ने उनले बताए । ‘‘नेपालमा कृषि प्रधान देश भएपनि कृषि उत्पादनले नेपाल मै पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने–‘भूमि सुधार गरेर कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन किसानलाई सत्तामा सहभागी गराउनु पर्छ ।’’
यस्तै एकता भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक तथा सांसद सीता नेपालीले कृषि पेसा आफैँमा सम्मानित पेशा भएकाले कृषिलाई आधुनुकिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । उनले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको कृषि पेशालाई सरकारले कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित बनाउने अभियानमा गम्भीरतापूर्वक रुपमा लागेको बताईन् ।
विदेशमा गएर मजदुरी गर्ने युवाहरुलाई तत्काल स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गनुपर्ने उनको भनाई छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कृषकहरुले पनि अब आत्मसम्मानको महशुस गर्नको लागि कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष नयाँराम थापाले विदेशमा कृषिमा काम गर्न जाने युवाहरुले आफ्नै गाउँ ठाउँमा कृषि गरेर बस्न आग्रह गरे । उनले चाहेमा आफ्नै गाउँ ठाउँमा कृषिबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने बताए । आर्थिक क्रान्ति र समृद्धीका लागि व्यवसायिक कृषि आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मायाप्रसाद शर्मा र केन्द्रीय सदस्य ठम्मर विष्टले पनि प्रशिक्षण दिएका थिए ।
यसैबीच भेलाले रेशन जि.सी. को अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ । भेलाले प्रदेश नं. ६ का सबै जिल्लामा असोजको मसान्तमा एकता भेला सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।